Naya course » कोरोना कहरः घर, आइसीयु कि कोठाको भित्तामा फोटो बनेर बस्ने ? कोरोना कहरः घर, आइसीयु कि कोठाको भित्तामा फोटो बनेर बस्ने ? – Naya course
एक पछि अर्को भटाभट पोजिटिभ केसहरु ह्वात्तै बढ्न लागेका थिए। सबै स्कुलरकलेजहरु कम्तीमा १ महिनाका लागि बन्द गरिएका थिए। त्यतिबेलासम्म इटालीमा स्वास्थ्य इमर्जेन्सी घोषणा गरिसकिएको थियो । अस्पतालहरुमा विरामी भर्ना गर्न ठाउँ नपुगेपछि सामान्य रोगीहरुलाई हटाएर खाली गर्न लगाइएको थियो। रुटिन सर्जरीहरु स्थगित गरिएका थिए। भएका डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीले विरामीको चाप धान्न सकेका थिएनन् । रिटायर्ड भईसकेकाहरुलाई बोलाइएको थियो । चिकित्सा बिषय अन्तिम वर्ष पढ्दै गरेकाहरुलाई काममा खटाइको छ, स्वयमसेवकहरु भर्ना गरिएका छन्। सिफ्टमा काम गर्ने भन्ने नै छैन, जती काम गर्न सकिन्छ, गर्नु भनिएको छ। इटालीमा धेरै डाक्टर नर्सहरुलाई पनि भाईरस संक्रमण देखिएको छ। उनीहरुको परिवार, बच्चाबच्चीलाई पनि देखिएको छ ।
१र२ जनामा संक्रमित फेला परेका छन्। संयोग नै मानौँ, कोरोनाको उद्गम हाम्रो नजिकैको छिमेक भए पनि लामो समय सन्सार घुमेर मात्रै नेपाल आईपुगेको छ। यसको अर्थ भाइरसले हामीलाई तयारीको लागि निक्कै समय दिएको हो। करिब ३ महिना समय भनेको निक्कै लामो समय हो। लामो समय पाउँदा पनि हामी तयारी बिना ढुक्क बस्यौं। यसले हामीलाई ठुलो घाटा त पक्कै पार्नेछ। अहिले मुलुक पुर्णँ लकडाउनमा छ। हामीहरु लकडाउनलाई एउटा चाढ वा उत्सवको रुपमा हेरिरहेका छौँ। सहरमा भएका हामी सम्भावित रोगलाई बोकेर गाउँमा पुगेका छौँ। यसबीचमा करिब ७ लाख मानिस गाउँ प्रवेश गरिसकेका छन् । लक डाउनको मर्म नबुझी हामी सडकमै निस्केर सेल्फी खिचेर रमाइलो मनाई रहेका छौँ। निश्चित अस्पताल, निश्चित स्वास्थ्यकर्मी र निश्चित आइसीयु भेन्टिलेटरले यो माहामारीमा हामीलाई स्वास्थ सेवा दिन सक्दैन । हाम्रो ब्यवहार नसुध्रिए हाम्रो प्यारो मान्छे मर्दा हामी मलामी जान पाउने छैनौँ ।